Vaovao - Ny vokatry ny fikolokoloana ny menaka esansiela amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana
Fahafaham-pahaizana sy voninahitra
Ny vokatry ny fikolokoloana ny menaka esansiela amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana
Ny menaka esansiela dia vovo-javamaniry nalaina avy tamin'ny voninkazo voajanahary, ravina, peel, voa, sampana ary faritra hafa, ary molekiola manitra an'ny zavamaniry. Ny toetra mampiavaka ny zavamaniry madio dia voatahiry nefa tsy nasiana fitambarana artifisialy. Misy vokany miavaka amin'ny hoditra, vatana ary fanahy izany.
Ny lanjan'ny molekiola tena ilaina amin'ny mololo dia 1/3000 an'ny sela zavamaniry, izay kely kokoa noho ny vatan'olombelona ny 1000 heny. Mora entin'ny hoditra izy io. Tonga ao amin'ny epidermis ao anatin'ny 1 minitra, ny dermis ao anaty 2 minitra, ary ny rafi-pandehanan'ny rà ao anatin'ny 10-15 minitra. Amin'ny fotoana mitovy amin'ny hoditra dia afaka mitsabo ny hoditra ao anatiny koa izy.
Menaka esansiela no ampiasaina amin'ny tarehy manadio sy manatsara ny hoditra. Aza hadino ny manosotra diloilo fototra alohan'ny hametahana azy amin'ny tarehy. Ny tahan'ny fandevonan-kanina azo antoka dia solifaratry ny huile essentielle ary 5ml (mitete 100 eo ho eo)
Amin'ny ankapobeny, ny raozy, voninkazo voasary makirana ary voasarimakirana dia matetika ampiasaina amin'ny fotsifotsy sy fikolokoloana ny tarehy. Ny menaka manitra sy raozy dia matetika ampiasaina amin'ny fanoherana ny fahanterana. Cypress sy rosemary dia matetika ampiasaina amin'ny astringent sy hentitra; lavender, hazo dite na geranium dia atolotra ho an'ny hoditra misy menaka sy manana olana!
2. Valanoranom-borona sy faladi-karandoha:
Ny fampiharana ireo faritra roa ireo dia afaka manampy amin'ny fanovana ny toe-po sy ny fandanjana ny fihetsem-po. (Ny lanilan-tsofina malefaka mihantona na miorim-paka eo ambonin'ny fototry ny lela ary voaforon'ny fanitarana ny hozatra palatine pharyngeal sy ny hozatra hafa. Io dia ampahany amin'ny sela manasaraka ny vava vava sy ny pharynx, noho izany dia misy ny fiasan'ny manasaraka ny rafi-pisefoana sy ny rafi-pandevonan-kanina.Fototry ny lavarangana kranial (Antsoina hoe fototry ny karandoha, izay ampahany lehibe amin'ny fitsaboana)
Ampirisihina hampiasa ditin-kazo manitra, sandalwood, patchouli ary miora.
3. Neck, handrina ary tempoly:
Rehefa misy fihenjanana eo amin'ny loha sy ny hatoka, ny fanosorana menaka esansiela amin'ireo ampahany telo ireo dia afaka manampy amin'ny fanalefahana azy!
Ampirisihina hampiasa lavender, mint ary emboka manitra!
Ny fametrahana menaka esansiela amin'ny tratra dia afaka mampiroborobo ny fikorianan'ny làlan-drivotra ary manampy amin'ny fitazomana fofonaina madio sy madio!
Manolora menaka esideza ampiasaina matetika: kininina sy rosemary, miaina milamina!
Asio menaka esansiela ao amin'ny kibony, indrindra ireo taova fandevonan-kanina lehibe, hanampiana ny fandevonan-kanina mahasalama sy hanamaivanana ny tsy fahazoana aina amin'ny fandevonan-kanina indraindray.
Manolo-kevitra ny hampiasa ny menaka manitra avy amin'ny sakamalao, coriander, fennel mamy ary dipoavatra mainty.
Asio menaka esansiela amin'ny aty mba hanampiana hanadio sy hanadio ary hanohanana ny asa fanadiovana sy fanadiovana ny taova.
Manolo-kevitra ny hampiasa voasarimakirana, grapefruit, geranium ary juniper.
7. Fiadiana, tongotra ary lamosina:
Ny fanosorana menaka tena ilaina hanorana ny sandry, ny hatotan-tànana, ny tongotra, ny lamosina ary ny faladian'ny tongotra dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ireo hozatra malemy sy mankarary ny hozatra ary ny tonon-taolana, ary mampiroborobo ny fizotry ny rà.
Ampirisihina hampiasa menaka maintso, veromanitra ary sipres ianao.
Ny fampiharana ny faladian'ny tongotra dia afaka mampiroborobo ny fidiran'ny menaka manitra haingana, satria mora kokoa ny mandray ny mason-koditra amin'ny faladian'ny tongotra, izay menaka esory mahasalama, azo antoka ary mora entina. Ny faladia matetika dia raisina ho toy ny fifandraisana misy eo amin'ny taova sy taova samihafa ao amin'ny vatana. Misy faritra maro antsoina hoe faritra reflex. Matetika ny fanentanana ireo faritra reflex dia mitovy amin'ny fiasa amin'ny taova na taova mifanaraka amin'izany. Tsy mora ny mahatadidy ny faritra taratra tsirairay, apetaho fotsiny ny menaka esansiela amin'ny tongotra manontolo!
Ampirisihina hampiasa toetra milamina, ditin-kazo manitra, vetiver, ylang ylang
Fotoana fandefasana: Oct-13-2020